Taratasy James – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Taratasy James
1:1 James, servant of God and of our Lord Jesus Christ, to the twelve tribes of the dispersion, fiarahabana.
1:2 Ry rahalahiko, when you have fallen into various trials, consider everything a joy,
1:6 But he should ask with faith, aza misalasala. For he who doubts is like a wave on the ocean, which is moved about by the wind and carried away;
1:14 Na izany aza tena, each one is tempted by his own desires, having been enticed and drawn away.
1:15 Taorian'izay, when desire has conceived, it gives birth to sin. Yet truly sin, when it has been consummated, produces death.
1:16 Ary noho izany, do not choose to go astray, my most beloved brothers.
1:21 Noho io, having cast away all uncleanness and an abundance of malice, receive with meekness the newly-grafted Word, which is able to save your souls.
2:1 Ry rahalahiko, ao ny be voninahitra finoanareo ny Tompontsika, Jesoa Kristy, aza misafidy ny mizaha tavan'olona amin'ny olona.
2:2 Fa raha misy olona efa niditra ny fiangonana, izay misy peratra volamena sy akanjo mirenty, Ary raha misy olona mahantra ihany koa niditra, in dirty clothing,
2:3 and if you are then attentive to the one who is clothed in excellent apparel, so that you say to him, “You may sit in this good place,” but you say to the poor man, “You stand over there,"na, “Sit below my footstool,"
2:5 My most beloved brothers, mihaino. Has not God chosen the poor in this world to be rich in faith and heirs of the kingdom that God has promised to those who love him?
2:8 So if you perfect the regal law, araka ny Soratra Masina, “You shall love your neighbor as yourself,” then you do well.
2:14 Ry rahalahiko, inona moa no soa no misy raha misy olona milaza ho manam-pinoana, nefa tsy manana asa? Ahoana no finoana ho afaka ny hamonjy azy?
2:15 Koa raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy, ary isan'andro noana,
2:16 ary raha misy aminareo dia mba lazao aminy: "Mandehana soa aman-tsara, foana mafana ary hikolokoloina,", Nefa tsy manome azy ny zavatra izay ilaina ho an'ny vatana, Inona no soa izao?
2:17 Noho izany dia ny finoana, raha tsy manana asa, Maty ny, in ary ho azy.
2:18 Mety hilaza ny olona iray ankehitriny: "Tsy manam-pinoana, ary izaho manana asa. "Asehoy ahy ny finoana raha tsy aseho! Fa izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny alalan'ny asa.
2:20 Koa dia, are you willing to understand, O foolish man, that faith without works is dead?
2:25 Toy izany koa, Rahaba, mpivaro-tena, was she not justified by works, by receiving the messengers and sending them out through another way?
3:1 Ry rahalahiko, not many of you should choose to become teachers, knowing that you shall receive a stricter judgment.
3:4 Consider also the ships, izay, though they are great and may be driven by strong winds, yet they are turned around with a small rudder, to be directed to wherever the strength of the pilot might will.
3:10 From the same mouth proceeds blessing and cursing. Ry rahalahiko, these things ought not to be so!
3:12 Ry rahalahiko, can the fig tree yield grapes? Or the vine, figs? Then neither is salt water able to produce fresh water.
3:16 Fa na aiza na aiza fialonana sy ny fifandirana dia, misy koa ny inconstancy sy ratsy fitondran-tena rehetra ny asa.
3:17 Fa ao ny fahendrena izay avy any ambony, Azo antoka fa, fahadiovam-pitiavana no voalohany, ary manaraka ny fihavanana, fahalemem-panahy, fisokafana, nanaiky amin'ny tsara, ny plenitude ny famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mitsara, tsy misy fahadisoana rehetra.
3:18 Ary noho izany ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.
4:1 Aiza no ady sy ny fifandirana eo aminareo ho avy? Tsy avy amin'izany: avy amin'ny ny faniriany, izay ady ao anatin'ny momba ny tenanareo?
4:2 Irinao, ary tsy manana. Ianao fialonana sy ianao hamono, ary ianareo dia tsy afaka ny hahazo. Ianao miady hevitra ary hiady, ary tsy manana, satria tsy mangataka.
4:3 Ianao mangataka nefa tsy mandray, satria mangataka ratsy, mba hampiasa azy io amin'ny faniriana manokana.
4:4 ianareo mpijangajanga! Tsy fantatrareo va fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao no mankahala an'Andriamanitra? Noho izany, na iza na iza no nisafidy ny ho sakaizan'izao tontolo izao dia efa natao ho toy ny fahavalon'Andriamanitra.
4:5 Sa ve ianao mihevitra fa zava-poana hoy ny Soratra Masina: "Ny fanahy izay monina ao anatinareo maniry ho fialonana?"
4:6 Fa manome fahasoavana lehibe kokoa. Koa izany no ilazany: "Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. "
4:7 Noho izany, maneke an'Andriamanitra. Fa manohitra ny devoly, dia handositra anareo.
4:8 Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona akaiky anao. Diovy ny tananareo, ry mpanota! Ary ataovy madio ny fonareo, duplicitous fanahy ianao!
4:9 Aoka ianao ho ory: be ory sy hitomany. Aoka ny fihomehezanareo hanjary ho alahelo, ary ny fifalianareo ho alahelo.
4:10 Haetry eo imason'ny Tompo, dia hanandratra anao.
4:11 rahalahy, do not choose to slander one another. Whoever slanders his brother, or whoever judges his brother, slanders the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge.
4:13 Fa iza moa ianao no hitsara ny namanao? Diniho ity, ianareo izay manao hoe:, "Izahay anio na rahampitso, dia hiditra ao amin'izany tanàna, ary azo antoka dia hitoetra any herintaona, ary hanao raharaham-barotra isika, ary hanao ny hahasoa,"
4:14 hevero fa tsy fantatrao izay ho rahampitso.
4:15 Fa inona moa ny fiainanao? Izy io dia zavona izay miseho mandritra ny fotoana fohy, ary rehefa afaka izany, dia levona. Noho izany izay mety holazainareo dia: "Raha sitraky ny Tompo,"na, "Raha velona,"Dia hataonay izao na izany.
4:16 Fa ankehitriny ianareo mifaly amin'ny fireharehany. Fifaliana rehetra toy izany ny ratsy.
4:17 Noho izany, ary iza no mahalala fa mety raha tsy manao zavatra tsara, nefa tsy manao izany, ho azy noho ny ota izany.
5:1 Act izao, ianareo izay mpanan-karena! Mitomania sy midradradradrà eo ny fahoriana, izay tsy ho ela tonga ao aminao!
5:2 Ny harenareo efa simba, ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao.
5:3 Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo, ary dia hihinana any amin'ny nofonareo tahaka ny afo. Efa nanangona fahatezerana ho anareo ho amin'ny andro farany.
5:4 Diniho ny karama ny mpiasa izay voajinja ny saha: efa fanontaniana mikasika io fanodinkodinam ny anao; dia mitaraina. Ary ny fitarainany efa niditra eo an-tsofin 'ny Tompo, Tompon'ny maro,.
5:5 Efa mivoky amin'ny tany, ary efa namahy ny fonareo amin'ny haitraitra, ho amin'ny andro hamonoana.
5:6 Ianao nentina ka namono ny Marina, ary tsy manohitra anareo izy.
5:7 Noho izany, mahareta, rahalahy, mandra-fiavian 'ny Tompo. Diniho fa ny mpamboly sarobidy mialoha ny vokatry ny tany, miandry amim-paharetana, mandra-mandray ny tany am-boalohany sy ny fara-orana.
5:8 Noho izany, ianao koa dia tokony hanam-paharetana, ary tokony hanamafy orina ny fonareo. Fa ny fiavian 'ny Tompo manatona.
5:9 rahalahy, aza mitaraina mifanaratsy, mba tsy hotsaraina. Indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana.
5:10 Ry rahalahiko, Diniho ny Mpaminany, izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo, ho toy ny ohatra ny hiala amin'ny ratsy, ny asa, ary ny faharetana.
5:11 Eritrereto fa beatify ireo efa niaritra. Efa renareo ny marary fijaliana Joba. Ary efa hitanareo ny faran'ny nataon'ny Tompo, fa ny Tompo dia mamindra fo sy mangoraka.
5:12 Raha tsy mbola tonga ny zava-drehetra, ry rahalahy, aza misafidy ny mianiana, na amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na na inona na inona fianianana hafa. Fa aoka ny teny hoe 'Eny' ho eny, ary ny teny hoe 'Tsia' tsy misy, mba tsy hiharan'ny fitsarana.
5:13 Misy aminareo mampalahelo? Aoka izy hivavaka. Ve izy na dia tezitra? Aoka izy hihira fiderana.
5:14 Misy olona marary eo aminareo? Aoka izy nitondra ny mpisorona 'ny Fiangonana, ary aoka ireo hivavaka ho azy, fanosorana azy diloilo amin'ny anaran'ny Tompo.
5:15 Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary, ary ny Tompo no hanamaivana azy. Ary raha manana fahotana, ireo dia hahazo famelan-keloka.
5:16 Noho izany, manaiky ny heloka iray hafa, ary mivavaha ho an'ny iray hafa, mba ho voavonjy. Fa ny Nifanesy koa ny fivavaky ny marina manjaka ny olona zavatra maro.
5:17 Elia dia olombelona mety maty toa antsika, ary amin'ny vavaka nivavaka fa tsy hilatsahan'ny ranonorana eto an-tany. Ary tsy hilatsahan'ny ranonorana mandritra ny telo taona sy enim-bolana.
5:18 Ary nivavaka indray izy. Ary ny lanitra nandatsaka ranonorana, Ary ny tany naniry ny voa.
5:19 Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana very, ary raha misy olona niova fo azy,
5:20 izany dia tokony ho fantany fa na iza na iza mahatonga ny mpanota mba hiova fo avy ny fahadisoan'ny ny lalany no hamonjy ny fanahiny tsy ho faty sady hanarona heloka be.